Ajụjụ 8 ịjụ onwe gị tupu iwere Ceilistat ntụ ntụ AASraw
/blog/nke a/Ajụjụ 8 jụọ onwe gị tupu iwere Ceilistat ntụ ntụ
Ihe na 09 / 14 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na nke a.
Ihe niile banyere Ceilistat ntụ ntụ
1. Aha aha: Ceilistat
2. Njirimara Chemical nke Ngwaahịa
3. Nkọwa dị mfe nke Heilistat ntụ ntụ
4. Ime ihe nke Ceilistat ntụ ntụ
5. Jiri Ceilistat
6. Nke a na-eme ka ọkpụkpụ na-emepụta ihe
7. Ihe na-emetụta Ọkachamara Nkeil
8. Nlekọta Nchedo
Ntuziaka 8.1 maka Nchekwa
8.2 Ihe ị ga - eme n'Ọdịnihu ị na - efu a ime
8.3 Ihe na - eme ma ọ bụrụ na ị na - atụgharịkwa na teililitat ntụ
8.4 Jiri akwukwo nchekwa n'ime umuaka
1. Product aha: Ceilistat
Aha IUPAC: 2-hexadecoxy-6-methyl-3,1-benzoxazin-4-one
Achọpụta Atom Stereocenter agụ 0
Igwe Atom dị egwu 29
Nkịtị ziri 401.293 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 401.293 g / mol
Gburugburu Ebe Gburugburu Ebe Obibi 47.9 A ^ 2
Ọnụ ọgụgụ a pụrụ ịgbanwe agbanwe 16
Igwe Mmuta Acondor Bond Acceptor 4
Mmiri na-enye mmiri ọgwụ 0
molekụla arọ 401.591 Mol
3. Nkọwa dị mfe nke Ceilistat ntụ ntụ
Cetilistat bụ ọgwụ gwọọ ọnụ nke a kwadebere iji nyere ndị buru ibu aka ịkwụsị ibu arọ. A na-ekewa ya n'okpuru benzozaxines, nke bụ ogige ndị nwere ogige nke nwere benzene jikọtara na ụda oxizine. Ngwunye oxizine bụ mgbanaka aliphatic 6 na 1 nitrogen atom, 1 oxygen atom, na 4 carbon carbon.
Nnyocha ndị metụtara ọnwụnwa ụmụ mmadụ egosiwo na onye nzọpụta ahụ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ na Orlistat (Xenical). Nke a arọ ọnwụ ọgwụ na-eme ka obere lipase pancreatic belata, nke bụ enzyme nke na-akụda triglycerides n'ime eriri afọ. Enweghị mbempe a na-egbochi nchịkwa nke triglycerides n'ime abụba abụba bara uru. Nke a na-enye ohere ka a ghara ịmegharị triglycerides n'enweghị ihe ọ bụla.
Dịka Orlistat, Ceilistat bụ onye na-agbachi egbugbere ọnụ, nke pụtara na ọ na-eme n'ime akụkụ eriri afọ iji belata egbugbere ọnụ, nke bụ enzymes ndị na-ahụ maka mmebi nke abụba nri. Ikike ya iji gbochie nkwụsị na mmụba nke abụba ndị na-eri nri site na mkpịsị ahụ, ọgwụ ahụ na-enye aka belata calories na uru anụ ahụ, na-enye aka inye aka na-efu.
Otu usoro nke ọnwụnwa nke Phase II gosipụtara nrụpụta na nchebe nke Ililistat. N'ime otu ugbua gbasara izu 12 ma gbasara 612 ndị ọrịa na-arịa ọrịa shuga, ndị nchọpụta chọpụtara na ndị ọrịa na-eji 80 milligrams na 120 milligrams nke Ceilistat ntụ ntụ nwere nnukwu ihe nha, na-achịkwa iji kpochapụ 3.85 kilogram na 4.32 kilogram. Nke a bụ ma e jiri ya tụnyere kilogram 2.86 nke ndị ọrịa ahụ weghaara placebo.
Ọ bụghị nanị na usoro ọgwụgwọ ahụ na-enweta ogo dị arọ dị ka Orlistat, mana ma ọgwụ abụọ nke ọnwụ na egosipụtakwa na ọ ga-eme ka HbA1c belata ọnụ ọgụgụ.
Ná mmalite nke otu nnyocha, ndị ọrịa nwere nchịkọta anụ ahụ dị n'etiti 28 na 45 ma nye ha metformin iji chịkwaa ọrịa shuga. Ọ bụ ezie na ndị ọrịa na-eji ọgwụgwọ ahụ dị arọ karịa ndị na-ewere Orlistat, òtù ndị na-agwọ ọrịa ahụ kwadoro ọgwụ ahụ ka mma. Ná ngwụsị nke ikpe ahụ, e mere ka o doo anya na nkwụsi ike na ihe nchekwa dịịrị nke a na-agbaso na-adịgide na ndị ahụ a hụrụ na ule ndị gara aga.
Ọnụ ọgụgụ nke nkwụsịtụ ngwa ngwa n'ihi ihe ọjọọ bụ 2.5 percent, 5.0 percent na 2.5 pasent maka 120 milligrams, 80 milligrams na 40 milligrams n'otu n'otu. Nke a bụ iji tụnyere 11.6 pasent maka Orlistat na 6.4 pasent maka placebo. Isi ihe mere eji eme ihe na-adịru nwa oge nke Orlistat bụ nsogbu ndị na-arịa ọrịa ọgwụ ọjọọ.
6. Ceilistat ntụ ntụ
N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị dọkịta na-edepụta ọgwụ ndị a na-agbapụta site na 60 milligrams gaa na 100 milligrams. I kwesiri iwere ogwu a dika nkwekorita gi nyere gi, ma ghara igafe onu ogugu ma asi na agwa ya.
Ọ bụrụ na ị na-ewere levothyroxine ma ọ bụ cyclosporine, jide n'aka na ị ga-eji ọgwụ ọjọọ 4-5 mee ihe ndị a tupu oge ma ọ bụ mgbe ị nwụsịrị.
Dị ka ọtụtụ (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile) arọ ọnwụ ọgwụ ọjọọ, leilistat nwere mmetụta ụfọdụ. Ihe ndị na-emekarị na mgbasa ozi na-agụnye (ma ọ bụghị nanị na):
Abdominal cramp ma ọ bụ mgbu
Abụba na stool
Ọ na-afụ ụfụ
Ntọala na ihapu
Ọ bụrụ na ịnweta mmetụta ọ bụla mgbe ị gwụchara, ọ dị mkpa ịchọta ọgwụ ahụ n'egbughị oge.
Na-echekwa tableilistat mbadamba na ụlọ okpomọkụ.
Chebe ha site na ìhè ma ọ bụ ikpo ọkụ.
Ejichala mbadamba ihe mgbochi a.
Zere anu ulo na umu.
Abanyekwala mbadamba ihe mgbochi ma ọ bụ belata ha n'ụlọ mposi.
Maka ama ndi ozo banyere esi ewepu mbadamba ogwu di iche iche, jide n'aka na ị gakwuru onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dibịa.
Echeghị ọgwụ a? Were ya ozugbo ị chetara. Ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka oge maka usoro ndokwa ị ga-esote, chefuo ụfụ ị tụfuru ma mee ndokwa ọzọ. Ejila ihe ọzọ iji mee ihe maka onye ahụ furu efu. Mgbe nchịkọta sochirinụ, malitegharịa usoro ịhazi oge dịka ọ dị na mbụ.
Eleghị anya ị ga - eche - gịnị ga - eme ma ọ bụrụ na m ga - echefu ọgwụ? Ọfọn, ịghara ịṅụ ọgwụ ga-ebelata irè ọgwụgwọ ahụ ma gbochie ọnụ ọgụgụ ihe ịga nke ọma ọnwụ gị. Ịhapụ usoro ọgwụgwọ n'oge ọgwụgwọ ga-ebelata irè ọgwụgwọ ahụ. Ụfọdụ ndị ọrịa na-egosiputa ihe ịrịba ama na mbubata oge ọ bụla ma ọ bụrụ na ha na-eleghara doses ugboro ugboro
Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ ndụmọdụ bara uru nke nwere ike igbochi gị ịhapụ mkpụrụedemede gị:
Debe oge, ntụgharị ikpebi oge kpọmkwem n'ụbọchị ị ga-ewere ọgwụ gị. Jide n'aka na ị ga-agbanwe usoro ọgwụgwọ gị iji mee ka ị dị mma.
Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu icheta iji were ọgwụ gị, dozie mkpu ma ọ bụ ncheta na ekwentị gị ma ọ bụ na-ekiri.
Rịọ ndị ezinụlọ gị ka ha chetara gị.
8.3 Ihe na - eme ma ọ bụrụ na ị kwụsị Ceilistat ntụ ntụ
Ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọchọrọ chọrọ n'oge na-adịghị anya ka ị na-atụ anya ya, echela echiche banyere ịṅụ ọgwụ na nnukwu ibu iji mee ka usoro ahụ dị ngwa. Nke a bụ n'ihi na, ọbụlagodi na ị na - ewepụta ọkpụkpụ ahụ na nnukwu oge ma ọ bụ na oge dị mkpirikpi karịa ka edere ya, ị gaghị enwelata ibu arọ, ma ọ bụ idalata ngwa ngwa. Kama nke ahụ, ịnwere ike ịkwụsị ọgwụ ahụ ma kwụsị nsogbu ụfọdụ nwere ike ịkpata ọnwụ.
O b ur u na i na-emekpu onwe gi na n 'ul o or ia, ch op uta n' ul o akw ukw o mberede ma obu ebe ah u ike. O di nkpa ka i weta akara, akpa, ma obu igbe gi ka ndi dibia wee nweta ihe di mkpa banyere ọgwụ.
Tupu ị na-eji Ceilistat, ọ ga-adị mma ka ị gwa onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dọkịta gị banyere ọgwụ ahụ na otú ị ga-esi were ya. Dịka ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ, Anaghị ekerịta ya. Nke a pụtara na ị gaghị enyefe onye ọ bụla ọzọ ihe mbadamba ụrọ a, ma ọ bụrụ na ọ nwere otu nsogbu dị ka gị. Nke a bụ n'ihi na usoro ọgwụgwọ ahụ nwere ike ịbe gị nchekwa, ma ọ nwere ike ịbụ ihe ọzọ nyefee.
8.4 Jiri Ceilistat na Children
Ekwesighi ka umu umuaka buru ihe omuma dika o puru igbochi uto ha. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkwụsị usoro ọgwụgwọ ruo mgbe afọ 18 maọbụ ruo mgbe uto zuru oke.
Jiri n'ime ụmụaka
Ụmụaka, karịsịa mgbe ha na-etolite, adịghị agba ume ka ha jiri ọgwụ ndị a mee ihe dịka ọ nwere ike inwe mmetụta ndị dị na ha na ogo. Ọgwụgwọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ịmịpụta ihe, nwere ike ichere oge ruo mgbe uto zuru ezu. [
Nnyocha e mere gosiri na a na-enwe ike ịmepụta a na-emepụta nke a arọ ọnwụ na oke oke na oke obula. E wezụga inwe ike ibu ibu, ndị ọrịa nwere nsogbu ndị ọzọ na-atụ oké ibu na-enwekwa ọganihu dị ukwuu.
Yamada Y, Kato T, Ogino H, Ashina S, Kato K: Ceilistat powder (ATL-962), akwụkwọ edemede pancreatic lipase inhibitor, na-eme ka uru dị arọ nke anụ ahụ dịkwuo mma ma kwado profaịlụ lipid na oke. Mmiri Mbara Res. 2008 Aug; 40 (8): 539-43. ma ọ bụ: 10.1055 / s-2008-1076699. Epub 2008 Ka 21.
P Kopelman, A Bryson, R Hickling, A Rissanen, S Rossner, S Toubro & P Valensi International Journal of Obesity volume 31, peeji nke 494-499 (2007
Obesara ntụ ntụ VS Ceilistat ntụ ntụ
Otu esi mara ihe niile nke osiilistat (cetislim) ntụ ntụ maka nkwụsị ibu
7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke -Phenylpiracet	7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Bromantane